Enwere m ike iwepụta ngwa ngwa m na Amazon maka mkpado na-adọrọ m aka n'elu ihe a chọrọ?
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịtọ gị onwe gị ka ị nwee ihe ịga nke ọma, ịkwesịrị ịkwado ma nweta mmelite Amazon gị maka isi isi okwu (i. e. , ndị otu isiokwu na ogologo-tail combinations na-eji maka ngwaahịa search ọtụtụ ugboro) - 20 tolli rehvide. Ma olee otu esi achọta isiokwu ziri ezi ma bulie ama Amazon n'ụzọ kachasị mma? Ihe a bụ nke dị ka Search Engine Optimization (SEO), iji bulite gị Amazon ịdekọ ị kwesịrị ị na-ewere isiokwu na elu search ina (na. e. , nnukwu nchọta ọchụchọ), n'ikwekọ na ọkwa zuru oke nke isiokwu (i. e. , dị mfe ịkwado maka). Nke ahụ bụ ihe mere tupu ihe ọ bụla ị ga - ahọrọ ịhọrọ ngwá ọrụ dị mkpa. N'okpuru ebe a, m ga - egosi gị ụfọdụ atụmatụ bara uru maka ịkwalite ndepụta Amazon maka isiokwu ndị ziri ezi na iji ngwá ọrụ kwesịrị ekwesị na arụmọrụ a gosipụtara. Ya mere, ka anyi bia n'ime!
Malite site na Google Keyword Planner
N'ụzọ doro anya, nke a bụ isi nyocha ihe nchọgharị nke ọma site na ihe ọ bụla ọkachamara SEO nwere ike inyere gị aka imeri ntinye aha Amazon maka isiokwu ndị ziri ezi. Iji dokwuo anya, ana m akwado iji Google Planner tupu ihe ọ bụla ọzọ - ka ịchọta nnukwu foto nke ihe ị na-atụle ngwaahịa na okwu ogologo oge. N'ụzọ dị otú a, ị ga-enwe ike ịghọta usoro nile nke ụwa ha ji - ọ bụghị naanị na Amazon onwe ya, kama site na ndị ahịa ndị yiri ya, dị ka eBay, Walmart, ụlọ ahịa Alibaba, wdg.
Kwalite Ndepụta Amazon Iji Ngwá Ọrụ Ngwá Ọrụ
Ozugbo ị nwetara nnukwu foto nke mkpirisi isiokwu gị, ọ bụ oge iji lee ha ule. M na-ekwu ebe a ị ga-ewere ezigbo isiokwu nyocha ngwá ọrụ kpọmkwem ahaziri iji bulie Amazon ndepụta. N'etiti ndị ọzọ, M nwere ike ikwu iji ndị na-eso - KeywordTool. na na JungleScout. Enyochala m ha abụọ iji bulie onwe m Amazon ndepụta maka isi lekwasịrị Keywords. N'okpuru ebe a ka anyị nwee nchịkọta nkenke maka onye ọ bụla n'ime ha.
Ọ bụ ngwá ọrụ dị ukwuu iji nọgide na-aga n'ihu na ụfọdụ isiokwu dị oke mkpa. Dị ka Google Resource Planner, ihe niile ị chọrọ bụ ịbanye isiokwu gị - ma nyere aka na ndepụta nchịkọta nke ọchụchọ ndị yiri ya nke ndị na-ere ahịa na-achọ otu ihe ahụ ma ọ bụ ụdị ngwaahịa. Kedu ihe ọzọ - KeywordTool. pụtara na ọ dị ezigbo mma, karịsịa mgbe ọ na-abịa n'ịchọta ihe ndị na-emekọ ọnụ na ogologo-tail okwu. Cheta na nhọrọ nkwekọrịta nke Amazon enweghi ike inyere gị aka mgbe niile na okwu ndị a, ọ bụ ya mere iji iji ngwá ọrụ nyocha nke isiokwu a kpọmkwem ahaziri ịghọ ezigbo nzọpụta maka onye ọ bụla na-ere ahịa na Amazon.
Na ebe a anyị na-emesị bịaruo isi - ihe ahụ bụ na ọ bụghị Mkpụrụ Akwụkwọ Atụmatụ, ma ọ bụ KeywordTool bụ n'ezie inye aka ịghọta ma eleghị anya ihe kachasị mkpa n'ebe ahụ - kpọmkwem nke okwu ọbụla dị ka ọ ga-enye gị ahịa karịa na Amazon. Ọ bụ ya mere m ji kwado iji JungleScout chọpụta otú ị ga-esi merie ihe ọ bụla ederede isiokwu, ma ọ bụ okwu ogologo oge nwere ike ịbụ. Ma ọ bụ, i nwere ike iji ya mee ihe maka nanị ebe ị ga-edegharị. Na njedebe, iji mee nyocha ikpeazụ maka onye ọ bụla nwere ike ịkwado nkwa ya ma chee ma ọ bụ onye ga-emeri ya iji bulie ndepụta Amazon gị nke ọma, ma ọ bụ ma ọlị.